Guddoomiyaha Degmada Luuq ayaa ku Dhaawacmay Qarax gaarigiia loogu Xiray – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya degmada Luuq ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Guddoomiyihii degmadaas Maxamed Xuseen Ganey uu ku dhaawacmay qarax.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa kuwa lagu xiro gaadiidka, waxaana la doonayay in lagu khaarijiyo Guddoomiyaha.
Hase ahaatee Guddoomiyaha ayaa waxaa soo gaaray dhaawac, waxaana xaaladiisa ay tahay mid wanaagsan.
Mas’uuliyiinta maamulka degmada Luuq ayaa sheegay inay wadaan howl gallo lagu baadigoobayo kooxihii gaadiidka qaraxa ugu xiray Guddoomiyaha.
Qaraxyada lagu xiro gaadiidka ayaa ahaa aalad cusub oo loo adeegsanayo khaarijinta shaqsiyaadka kala duwan, iyadoo lagu xiro qeybta hoose ee ku aadan kursiga darawalka gaariga.
Al-Shabaab ayaa horay ugu sheegatay mas’uuliyada qaraxyada gaadiidka lagu xiro oo lagu dilay dad kala duwan oo ay ku jiraan Mas’uuliyiin, saraakiil ciidan iyo dad kale.
Ciidanka Heeganka Bariga Afrika oo diyaar u ah howlgal.